Home » Vaovao momba ny fiaramanidina » Manila dia nametra ny fahatongavan'ireo mpandeha fiaramanidina iraisam-pirenena ho 1,500 taorian'ny isa COVID
Miambina hatrany i Filipina aorian'ny fisondrotan'ny tranga COVID-19 vaovao. Nihidy ary voafetra ny laharan'ny fahatongavan'nny seranam-piaramanidina, nisintona ny frezy vonjy maika ny tanàna.
Ny 17 febroary Manila dia nandrakitra tranga COVID vaovao nahatratra 1,718 28, tamin'ny 10,000 martsa dia nisy aretina XNUMX vaovao ihany koa tao amin'io tanàna io
Nakaton'ny manampahefana tao Manila ny renivohitr'i Filipina
Ny fitsangatsanganana ivelany izao dia voafetra ho an'ny mpanjifa iraisam-pirenena miisa 1,500 mankany amin'ny Seranam-piaramanidina Iraisam-pirenena Manila.
Manila sy ny faritra manodidina dia nitatitra tranga COVID-10,000 vaovao miisa 19 ary mametraka ny tanàna hidina mandra-pahatongan'ny alahady paska.
Ho fanampin'izany, ny Birao Aeronautika sivily dia namoaka torolàlana momba ny fitaterana an'habakabaka mametra ny fahatongavan'ireo mpandeha iraisampirenena mankany amin'ny seranam-piaramanidina Iraisampirenena Ninoy Aquino (NAIA) any Manila ka hatramin'ny mpandany 1,500 isan'andro.
Na izany aza, io dia iharan'ny fanitsiana araka izay tapa-kevitry ny Departemantan'ny fitaterana.
Nampitandrina ny orinasa fiaramanidina rehetra miasa ao amin'ny NAIA ny birao mba tsy hihoatra ny fahafaha-manana avela, raha tsy izany dia hosazina izy ireo mifanaraka amin'ny Jular Memorandum Circular No. 2021-01 tamin'ny 08 Janoary 2021, navoakan'ny Manila International Airport Authority (MIAA), Clark International Airport Corporation (CIAC), Civil Aviation Authority of the Philippines (CAAP), ary ny Civil Aeronautics Board (CAB);
Ny asa ara-barotra eto an-toerana dia avela hanaraka ny fepetra takiana na fetra amin'ny fahaiza-manao sy ny fahita matetika amin'ny sidina izay apetraky ny LGU rehetra ivelan'ny bubble NCR +, hoy ihany ny birao.